Riyada oo xaqiiqada la kulantay - Telling the Real Story
Dhaamantood waxay ku jiraan labaatameeyo, waxayna Somalia uga soo safreen Yurub intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2012 xiligaas oo ay dhalinyaro ahaayeen. Maanta, iyaga iyo dhalinyaro ka soo jeeda Afghanistan ayaa waxay wada abuureen urur lagu magacaabo “Ururka Caruurta Aan la wehlin”, kaasoo ka shaqeeya u doodista caruurta aan la wehlin ee ku nool Sweden.
Sheekada ayaa ku saabsan sawirkii ay ka haystaan Yurub iyo riyadii ay islaahaayeen waa gaaraysaan marka halkaan ay yimaadaan. Sida in ay helaan waxbarasho fiican, shaqo wanaagsan, baabuur fiican iyo nolol wanaagsan. Waxay ka warameen sidii ay xaaladu ahayd markii ay halkaan yimaadeen iyo in ay dareemeen in ay khiyaali ahayd; iyadoo Yurubta ay ku riyoonayeen in ay tagaan oo ay Somalia uga soo safreen aysan noqon mid u dhow sidii ay filayeen.
“Waxaan haystay sawir ah in markii aan Yurub tago aan heli doono mustaqbal fiican” ayuu yiri Mubarak. “Markii aan halkaan nimid ayaan aragtay xaqiiqada, in nolosha halkaan ay aad uga dhib badantahay mida dalkii.” Sawirkaan qaldan ee Yurub, ayay sheegeen in ay gudbiyaan qurba-joogta kuwaasoo sheekooyin been ah ka sheega noloshooda Yurub.
Sheekada ayaa dhinac kale u weecatay markii kooxdu ay dib u milicsadeen noloshii Somalia. Waxaa hawada ku jidha shalaay. “Noloshu waa dhib yarayd dalkii. Waxaan ciyaari jirnay kubada iyo waxyaabo kale, iskuulka ayaan tagi jirnay, ma jirin waqti cayiman oo waxkasta la sameeyo” ayuu yiri Nimis. “Laakiin halkaan, noloshu waxay noqotay sida mashruuc.”
Asxaabtooda ku nool Somalia ayaa wali doonaya in ay soo tahriibaan, xitaa haddii looga digay dhibaatada tahriibka iyo xaqiiqada nolosha Yurub. “Waxay u maleeyaan in nolol fiican taalo Yurub, waxay arkaan sawiradan qurxoon ee barafka Yurub markaas ayay u maleeyaan in ay fiicantahay. Ma arkaan dadka walwalsan ee halkaan ku nool.”
Ragga dhamaantood waxay ka warameen dhibaatadii tahriibka. Qaarkood xabsi ayay soo galeen, qaar badan ayaa asxaabtooda ku waayay saxaraha. Hada waxay ka midyihiin qurba-joogto oo ay mudo ku riyoonayeen in ay ka midnoqdaan. Inkastoo ay soo galeen Yurub, hadana ma aaminsana in ay u qulantay halganka ay soo mareen iyo qarashka ka soo baxay.
Halkaan ka daawo muuqaalka kooxda oo ka waramaysa nolosha Yurub.